China Sides fafaza retort ifektri abakhiqizi | Dingtaisheng
Imibhobho yesifutho esinezinhlangothi ezine ehlelwe kuthileyi ngamunye ingafinyelela kumphumela ofanayo kunoma isiphi isikhundla sethreyi ezingqimbeni ezingaphezulu nezingezansi, ngaphambili, emuva, kwesobunxele, kwesokudla, futhi ifinyelele ikhwalithi efanelekile yokushisa nokuvala inzalo. Imodyuli yokulawula izinga lokushisa (uhlelo lwe-D-TOP) olwenziwe yi-DTS inezigaba ezifinyelela kwezingu-12 zokulawula ukushisa, futhi isinyathelo noma ukulingana kungakhethwa ngokuya ngemikhiqizo ehlukile futhi kucubungulwe izindlela zokufudumeza iresiphi, ukuze ukuphindeka nokuzinza phakathi kwamaqoqo emikhiqizo zenziwe kahle, izinga lokushisa lingalawulwa ngaphakathi kwe- ± 0.5 ℃.
Gcina inani elifanele lamanzi ezansi kwe-retort. Uma kunesidingo, le ngxenye yamanzi ingajovwa ngokuzenzakalela ekuqaleni kokushisa. Ngemikhiqizo egcwele amanzi, le ngxenye yamanzi ingafudunyezwa kuqala ethangini lamanzi ashisayo bese ifakwa. Phakathi nayo yonke inqubo yokuvala inzalo, le ngxenye yamanzi ifafazwa kulo mkhiqizo ngepompo enkulu yokugeleza kanye nemibhobho yokufafaza enezinhlangothi ezine ehlelwe kuthileyi womkhiqizo ngamunye ukuze kuzuzwe umphumela ofanayo kunoma isiphi isikhundla sethreyi ezingqimbeni ezingaphezulu nezingezansi , phambili, emuva, kwesobunxele nangakwesokudla. Ngakho-ke ikhwalithi ekahle yokushisa nokuvala inzalo iyatholakala. Ngoba ukuqondiswa kombhobho kucacile, kunembile, kufana futhi kusakazeka ngokuphelele amanzi ashisayo kungatholakala maphakathi kwethileyi ngalinye. Uhlelo olufanele lokunciphisa ukungalingani kwezinga lokushisa ethangini lokucubungula le-largeortort retort liyatholakala.
Ithileyi lepulasitiki Isikhwama sokupakisha se-Flexible
Imikhiqizo yobisi igcwele ukupakisha okuguqukayo
Imifino nezithelo (amakhowe, imifino, ubhontshisi) kugcwele izikhwama eziguquguqukayo
Inyama, izinkukhu ezisezikhwameni zokupakisha eziguquguqukayo
Inhlanzi nokudla kwasolwandle okusemaphaketheni agobekayo
Ukudla kwezingane ezikhwameni zokupakisha eziguquguqukayo
Ukudla okulungele ukudla emaphaketheni okupakisha aguquguqukayo
Ukudla kwesilwane esifakwe emaphaketheni aguquguqukayo
Langaphambilini I-Cascade retort
Olandelayo: Ukucwiliswa Kwamanzi
Amatebhe Amanzi Spray Retort
Futha i-Retort Sterilizer
Amanzi Futha Ukubuyisa Machine
Amanzi Futha Ukuhlanza Ukubuyisa Umshini